Wararka - Kobci Khadka Shidaalka ee Ptfe | BESTEFLON
OEM & DHAQANKA
PTFE Tuubada Caansan ee Daran
PTFE Tuubada Qalloocan
Tuubbada PTFE oo leh Lakabka Daboolka
PTFE Tube Qasane
PTFE Tuubada Biriiga
Golaha Tuubada PTFE
Waa maxay sababta Besteflon
U Kordhi Khadka Shidaalka Ptfe | BESTEFLON
Marka loo eego noocyada kala duwan ee bareega baabuurta, waxaa loo qaybin karaa tuubada jejebiye haydarooliga, tuubada jejebiye pneumatic iyo tuubada jejebka faaruqinta. Marka loo eego maaddadeeda, waxay u qaybsan tahay tuubada bareega caagga ah, tuubada jejebiyeyaasha nylon iyo tuubada jejebka PTFE
Tuubada biriiga biriishku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka xoogga gilgilashada xooggan iyo rakibidda fudud, laakiin khasaaraha ayaa ah in dusha sare ay u fududahay gabowga kadib isticmaalka muddada dheer
Markay tahay heerkulka hooseeya, xoogga dabacsanaanta ee tuubada jejebiyeyaasha naylon ayaa daciifaysa, haddii ay saameeyaan xoogag dibadeed, way fududahay in la jebiyo
Laakiin tuubada PTFE waxay leedahay iska caabin heerkulka sare ah, heerkul hoose, iska caabin cadaadis sare, xirashada iska caabbinta, iska caabinta daxalka iyo astaamaha kale, nolosha adeegga dheer, uma baahna beddel joogto ah. Wuxuu magdhow ka bixin karaa khaladaadka labada agab ee kale
Nabadgelyada, cimriga dheer, iyo waxqabadku waa inay ahaadaan ahmiyadahaaga ugu sarreeya. E85 ama ethanol waxay cadeeyeen inay yihiin shidaal dhaqaale iyo hufan oo bixin kara lambarka octane -ka loo baahan yahay iyo awooda awooda codsiyada dalbanaya. Laakiin waxyaabaha lagu daro shidaalka casriga ah ayaa adkayn kara oo hoos u dhigi kara agabka badankood. Tani waxay horseedi kartaa daadad halis ah waxayna ka tagi kartaa ur xun. Marka qadka shidaalku xumaado, walxaha tuubada saboolka ahi waxay wasakhayn karaan oo xidhi karaan kanalka shidaalka iyo kanaalada carburetor -ka, taasoo saamaynaysa waxqabadka iyo dhibaatooyinka
Xalka ugu fiican waa maaddada polytetrafluoroethylene (PTFE). PTFE waa shay caag ah oo ah tuubada shidaalka ugu dhuuban uguna fudud ee la heli karo. Waxay isku daraysaa 304 birta birta sare leh oo lagu xardhay tuubbo PTFE gudaha ah si loo kordhiyo socodka, iyo dhismaha bannaanka ee adag wuxuu bixiyaa dabacsanaan cajiib ah. Tuubbada PTFE ee gudaha ayaa ku habboon in lagu isticmaalo shidaal kasta waxayna u adkeysan kartaa heerkulka illaa 260 darajo Celsius. Maaddadu ma saamayso shidaalka oo xumaada, markaa uumiga shidaalku ma soo baxo
Talooyinka guud ee nidaamyada shidaalka:
Marka la rakibayo a Tuubbada PTFE saaran baabuurta, ka fogee tuubbooyinka shidaalka ilaha kulaylka, geesaha fiiqan iyo qaybaha dhaqaaqa. Had iyo jeer u oggolow oggolaansho ku filan dhaqdhaqaaqa nidaamka awoodda. Hubi nadiifinta u dhexeysa hakinta iyo qaybaha nidaamka gudbinta. Hubi inaad hubiso qaybaha hakinta inta ay socoto hawsha oo dhan si aad uga fogaato tuujin ama fidinta tuubooyinka shidaalka. Dhuumaha shidaalka ee u nugul burburka waddada iyo heerkulka sare, isticmaal dhuumaha shidaalka ee PTFE oo lagu xardhay birta birta ah ama silig adag. U hubso inaad si fiican u dhejisid tuubada si aad uga hortagto jahawareer. Jig wuxuu kaloo caawiyaa yaraynta gariirka qaybaha kale. Isticmaal ku -rakibyada qaybinta habboon marka aad ku dhex shubtid darfaha
Waxa kale oo laga yaabaa inaad jeceshahay
Tuubada FUEL PTFE
PTFE tuubada safan
Waqtiga dhejinta: Sep-17-2021
Macluumaadkii ugu dambeeyay iyo isbeddellada shirkadeena iyo aqoonta warshadaha ee khuseeya PTFE HOSE.
PTFE line shidaalka su'aal waxa brand iyo wh ...
Laynka adag ee birta ama khadka shidaalka PTFE Tayada ...
Taleefan: 0086 752 7778 829
Xuquuqda daabacaadda - 2020-2022: Dhammaan Reserved Rights. Alaabta Kulul - Khariidadda bogga
ptfe tuubada tidcan, Qallooca Ptfe Tuubada - 939/939b, 6an Golaha Ttfe Ptfe, tuubada ptfe, ptfe tuubada dahaarka leh, Shirka tuubada PTFE,